रहेनन् लेखक तथा निर्देशक छेतेन गुरुङ - नेपालबहस
रहेनन् लेखक तथा निर्देशक छेतेन गुरुङ
| ११:३४:१५ मा प्रकाशित
२४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक छेतेन गुरुङको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान गुरुङको मृत्यु भएको हो । लामो समयदेखि कलेजो रोगबाट ग्रसित उनको पछिल्लो समय उपचार जारी रहेपनि सञ्चो हुन सकेको थिएन ।
केही दिनयता गम्भिर अवस्थामा रहेका उनको बुधबार बिहान २ बजे ४२ बर्षको उमेरमा महारागंजस्थित मेट्रो अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनी स्क्रिप्ट लेखकका रुपमा चर्चित छन् । कथा र पटकथा लेखनमा आफ्नो छाप बनाएका उनले पछिल्लो समय निर्देशकका रुपमा पनि परिचित थिए ।
एक समयको सुपरहिट चलचित्र ‘नोभेम्बर रेन’को कथा लेखेर उनले आफूलाई चलचित्र लेखकका रुपमा परिचित गराएका थिए । जुन चलचित्रबाट उनले उत्कृष्ट लेखकको अवार्ड पाउँदा आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठले उत्कृष्ट नायक नायिकाका रुपमा धेरै अवार्ड जितेका थिए ।
‘डमरुको डन्डबियो’ चलचित्र निर्देशन गरेका उनले पछिल्लो समय ‘प्रेमगित ३’ निर्देशन गरेका थिए । सन्तोषसेन ठकुरीको हिट सिरिज अन्तर्गत ‘प्रेमगित ३’ को कथा लेखेका उनले निर्देशनको जिम्मा समेत पाएका थिए । मनाङमा गएको हिउँदमा चलचित्रको सुटिङ गरेका उनी अहिले पोष्ट प्रोडक्सनमा व्यस्त थिए । चलचित्र गएको चैत २८ गते प्रदर्शन गर्ने भनेपनि कोरोनाका कारण २०७७ चैत २८ गते सरेको थियो । यो चलचित्र उनको जीवनको अन्तिम चलचित्र समेत बनेको छ ।
यही बीचमा उनलाई पुरानै रोगले च्यापेको हो । कुनै समय गाँजा, चुरोट र लागुऔषधका अम्मली गुरुङ लामो समय रिह्याब सेन्टरमा बसेका थिए । लागुऔषध दुव्र्यसनीकै क्रममा उनी झण्डै एकपटक गम्भिर बिरामी पर्दा मृत्युको मुखबाट फर्केका थिए । त्यहीबेला उनले आफ्नी छोरीले भनेको मानेर लागुऔषध छाडेका थिए । तर उनलाई लागुऔषधको असर भने दीर्घकालिन रुपमा शरीरमा परिसकेको थियो ।
जसका कारण उनले ४२ बर्षकै अल्पायुमै ज्यान गुमाउनुपर्यो । उनकी आमा र छोरी छन् । उनकी श्रीमतिको भने यसअघि नै मृत्यु भइसकेको थियो । गुरुङको मृत्युमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सबैले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालगञ्जको ‘वाटरपार्क’ छिट्टै सञ्चालनमा आउने १० मिनेट पहिले
मुर्कट्टाको राज्याभिषेक: २५ मिनेट पहिले
सरकारलाई जनभावनाअनुसार काम गर्न सुझाव :शङ्कर भण्डारी ४१ मिनेट पहिले
प्रदेशसभा सदस्य सिग्देललाई कोरोना संक्रमण ४७ मिनेट पहिले
ओलीको प्रतिगामी तयारी नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय टुक्र्याउँदै ५५ मिनेट पहिले
ब्रोइलर कुखुरालाई रंग लगाएर लोकल भन्दै १५० रुपैयाँमा बिक्री ! ५९ मिनेट पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! १ घण्टा पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला १ घण्टा पहिले
माटोको ढिस्कोले पुरिएर स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते ! ३ घण्टा पहिले
श्रीमतिसँग होटलमा खाना खान गएका शुशिलको साहुको कुटाईबाट मृत्यु ३ घण्टा पहिले